CoolCoin စျေး - အွန်လိုင်း COOL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CoolCoin (COOL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CoolCoin (COOL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CoolCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
COOL – CoolCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CoolCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CoolCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CoolCoinCOOL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.743CoolCoinCOOL သို့ ယူရိုEUR€0.63CoolCoinCOOL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.569CoolCoinCOOL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.678CoolCoinCOOL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr6.72CoolCoinCOOL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.7CoolCoinCOOL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč16.58CoolCoinCOOL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.78CoolCoinCOOL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.994CoolCoinCOOL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.04CoolCoinCOOL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$16.63CoolCoinCOOL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$5.76CoolCoinCOOL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$4.04CoolCoinCOOL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹55.74CoolCoinCOOL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.124.74CoolCoinCOOL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.02CoolCoinCOOL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.12CoolCoinCOOL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿23.2CoolCoinCOOL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥5.18CoolCoinCOOL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥78.7CoolCoinCOOL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩883.49CoolCoinCOOL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦281.2CoolCoinCOOL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽54.76CoolCoinCOOL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴20.54
CoolCoinCOOL သို့ BitcoinBTC0.00006 CoolCoinCOOL သို့ EthereumETH0.00196 CoolCoinCOOL သို့ LitecoinLTC0.0129 CoolCoinCOOL သို့ DigitalCashDASH0.00764 CoolCoinCOOL သို့ MoneroXMR0.00793 CoolCoinCOOL သို့ NxtNXT53.71 CoolCoinCOOL သို့ Ethereum ClassicETC0.106 CoolCoinCOOL သို့ DogecoinDOGE213.05 CoolCoinCOOL သို့ ZCashZEC0.0079 CoolCoinCOOL သို့ BitsharesBTS29.06 CoolCoinCOOL သို့ DigiByteDGB27.24 CoolCoinCOOL သို့ RippleXRP2.51 CoolCoinCOOL သို့ BitcoinDarkBTCD0.0254 CoolCoinCOOL သို့ PeerCoinPPC2.55 CoolCoinCOOL သို့ CraigsCoinCRAIG336.45 CoolCoinCOOL သို့ BitstakeXBS31.49 CoolCoinCOOL သို့ PayCoinXPY12.89 CoolCoinCOOL သို့ ProsperCoinPRC92.64 CoolCoinCOOL သို့ YbCoinYBC0.000397 CoolCoinCOOL သို့ DarkKushDANK236.72 CoolCoinCOOL သို့ GiveCoinGIVE1598.08 CoolCoinCOOL သို့ KoboCoinKOBO171.93 CoolCoinCOOL သို့ DarkTokenDT0.684 CoolCoinCOOL သို့ CETUS CoinCETI2130.82
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 22:15:02 +0000.